Betsaka ny tsy manara-dalàna : tsy mandoa hetra ny 67 % amin’ny tokony handoa hetra | NewsMada
Betsaka ny tsy manara-dalàna : tsy mandoa hetra ny 67 % amin’ny tokony handoa hetra
Notsorina ny fomba fandoavan-ketra, araka ny lalàna ao amin’ny tetibola 2018. Koa nitondrana fanazavana tamina mpandraharaha maro izany, omaly, tao amin’ny Antenimieran’ny varotra.
Maznombhoka amin’ity 2018 ity, ny hetra tambatra (impôt synthétique) latsaky ny 100 tapitrisa Ar ary ny TVA mihoatra ny 100 tapitrisa Ar. Noraisina izao fepetra izao hampirisihana ny mpandraharaha rehetra handoa hetra, haka faktiora amin’izay zavatra vidiany. “Tanjona ny hampitomboana ny vola miditra avy amin’ny hetra amin’ity taona ity”, hoy ny tale jeneralin’ny hetra, Razafindrakoto Youri Garisse.
Tsy mandoa hetra ny 67 % amin’ny tokony handoa hetra, raha ny salanisa eto amintsika no jerena. Misy mpandraharaha mampihodina volabe izao, mahita hatrany fomba hialana amin’ny hetra. Efa misy fepetra noraisin’ny fanjakana, ohatra, amin’ny fametrahana ireny “caisse enregistreuse” ireny, saingy mbola misy tsy mampiasa izany. Kely izany ny vola miditra amin’ny fanjakana. Ho an’ny rehetra ny hetra na betsaka na kely ny fidiram-bola ao aminy. An’ny fanjakana foibe ny TVA sy izay avy amin’ny vola miditra rehetra ; an’ny kaominina kosa ny hetran-trano sy tany, sy ny hafa araka ny nofaritan’ny lalàna.
“2.181 miliara Ar ny hetra niditra taona 2017, raha ny kajijaky natao, tokony ho tafakatra 2.751 miliara Ar izany amin’ity taona ity. Mbola tokony ho ambony lavitra no ho io raha manara-dalàna avokoa ny Malagasy”, hoy ihany ny tale jeneralin’ny hetra. Ankoatra ny eto Analamanga, hotohizana any amin’ny faritany izany fanentanana izany. Nasian-teny ireo mivarotra amin’ny “internet”. Misy amin’izy ireny ny manara-dalàna, manao fanambarana, misy ny tsy ara-dalàna na “informel”. Raha fintinina izany, mila henjana amin’ny fanaraha-maso ary sorohina ny kolikoly.